ဘုရင်မကြီးအဲလိဇဘက်၏အနှစ်သက်ဆုံး: သူမကိတ်, Camilla သို့မဟုတ် Meghan မှကြိုက်နှစ်သက်သည်ကြောင်းဘုရင်မကြီး? - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် II ၏ "ဒီအကြိုက်ဆုံး: သူမကိတ်, Camilla သို့မဟုတ် Meghan မှကြိုက်နှစ်သက်သည်ကြောင်းဘုရင်မကြီး?
la ကျောက်ကပ် 93 နှစ်အသက်အကြီးဆုံးဗြိတိန်ဘုရင်စိုးစံနှင့်၎င်း၏သမိုင်းအများစုဖြစ်ပါတယ်။ တော်ဝင်တော်ဝင်ပရိတ်သတ်တွေငယ်ရွယ်မိန်းမတို့, တော်ဝင်မိသားစုခေတ်မီအထူးသဖြင့်သူတို့အားထိခိုက်ထုံးစံကိုချစ်နေစဉ်, မိဖုရားလူမျိုး၏နှလုံး၌တန်ဖိုးရှိသောနေဆဲဖြစ်သည်။
ဘုရင်မကြီးနဲ့ မင်းသားဖိလိပ္ပု 72 သူတို့သားသမီးလေးယောက်ခဲ့သည့်ကာလအတွင်းနှစ်ပေါင်းလက်ထပ်ခဲ့ကြပြီ။
ကလေးများ မင်းသားချားလ်စ် မင်းသမီးအန်း, မင်းသားအင်ဒရူး မင်းသားအက်ဒွပ်ရှစ်ကလေးများနှင့်ရှစ်မြေးရှိခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်သူမလက်ထပ်ထိမ်းမြားအားဖြင့်တော်ဝင်မိသားစုအတွက်ငါးခုအခြားအမျိုးသမီးရှိပါတယ်: Camilla, Cornwall ၏ Duchess ဆိုဖီ, Wessex ၏ Countess, ကက်သရင်း, ကိန်းဘရစ် Duchess Meghan Sussex Duchess နှင့်ဆောင်းဦးရာသီ Philips က
သို့သော်မိဖုရား၏အနှစ်သက်ဆုံးသောအရာအားလုံးသည်သူ၏သည်အခြားသမီးတို့သမီး-in ကို, လော
ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် II ၏အနှစ်သက်ဆုံး: တော်ဝင်မိသားစုသစ်ပင် (Image: EXPRESS.CO.UK)
တစ်ဦးကဟောင်းကတော်ဝင်မင်းကြီး, ဘုရင်မကြီးရဲ့ Sandringham န်ထမ်းများမကြာခဏသူမဘုရားကျောင်းသွားအဖြစ် Rolls Royce မှာအပတ်တိုင်းသူ့ကိုအတူလိုက်ပါမည်သူအပေါ်အလောင်းအစား - ငါတို့သည်အချို့သောအဘို့ကောင်းသောပြပွဲ preference ကိုမြင်သောအခှငျ့ထူး အခြားသူတွေအပေါ်တစ်ဦးချင်းစီ။
နှင့်ဤပြိုင်ပွဲများ၏ဆုရှင်တရားမဝင်ဆိုဖီ Wessex ဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်လှေကား "ဘုရားကျောင်းကိုသွား," ထုတ်ဖော်ပြသတစ်ဦးကယခင်တော်ဝင် equerry "- - များသောအားဖြင့်စနေနေ့ညဉ့်တွင်သူမတစ်ဦးလိုသည်ဆိုပါကဆိုဖီ Wessex Sandringham မှာဖြစ်နေဆဲလျှင်, သင်နီးပါးဘုရင်မကြီးသူ့ကိုမေးလျှင်အာမခံနိုင်" အလွဒစ်ဂျစ်တယ်ပြောသည် ဟောင်းတစ်ဦးတော်ဝင် equerry ။
"ထိုအခါအတူတူပါပဲ Balmoral ဖြစ်ပျက်နေသည်။ မိဖုရားလုံးဝအေးဆေးဖြစ် likes ။ အသင်းတော်၏အရှေ့ဘက်နှင့်ဆိုဖီ၏ရှေ့မှောက်တွင်တွေ့
"နောက်ကျောအဖုံးကိုမျက်နှာသာ၌ရှိသောသူလည်းညွှန်ပြတော်ဝင်သူတို့အားပုံမှန်မဟုတ်သောနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်အဘယ်သူသည်ဥပမာ - အဘို့, မင်းသမီးအန်းတစ်ချိန်တည်းမှာနေဖို့နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်လောက်မကြာခဏသင် Rolls အတွက်မြင်သနည်း ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် II ကို Camilla နှင့်ဆိုဖီ၏ 19659017] ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် II ကို Camilla နှင့်ဆိုဖီ၏ "ခေါင်းစဉ် =" အကြိုက်ဆုံး ">
ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် II ၏အနှစ်သက်ဆုံး: မိဖုရားသူမရဲ့သားအမြိုးသမီးမြားကိုပိုမိုနှစ်သက်ဘယ်သူနည်း (ရုပ်ပုံ: Getty)
ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် II ၏အနှစ်သက်ဆုံး: ဘုရင်မကြီးဆိုဖီ, Prince Edward Island တွင်၏ဇနီးနှင့်နီးစပ်သောပါလိမ့်မယ် (ရုပ်ပုံ: Getty)
အလွဒစ်ဂျစ်တယ်အဆိုအရဘုရားကျောင်းခရီးစဉ်မိဖုရားရဲ့ဒူး ထောက်. အပေါ်တစ်ဦးညျတာစောင်ချောမွေ့စေရန်ကူညီပေးသည်ရာ 54 နှစ်ပေါင်းအသက်အက်ဒွပ်၏မယား, အတူစတင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါတော်ဝင်အကူအညီကဆက်ပြောသည်: "ဘုရင်မကြီးမိဖုရားယုံကြည်စိတ်ချရသိရသည်နဲ့ကျွန်မကင်းဘရစ်၏ Duchess များနှင့် Cornwall ၏ Duchess လျှောက်ထားဟုမဆိုနိုငျသောလမ်းအတွက်မဖြစ်၏ခဲ့သည်။
သူကဒီဆိုဖီများ၏အပျနှံ၏သေးငယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးသိတယ် - - သူမသတိဖြစ်ပါသည်, အဖြစ် "ဒီမိဖုရားလညျးမိမိကအခြားသားသမီးများ၏ဆက်ဆံရေးပျက်ကွက်ခဲ့ကြဘယ်မှာဆိုဖီတို့လက်ထပ်ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်ကိုသတိထားမိဖြစ်ပါသည် ဒါဟာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်သည်သူ၏အက်ဒွပ်သတ္တဝါ၏အမိ။
ဘုရင်မကြီးအဲလိဇဘက်၏အနှစ်သက်ဆုံး: အဆိုပါဘုရင်မကြီးဆိုဖီအခြားမိန်းကလေးတစ်ဦးအဖြစ်ထင် (ရုပ်ပုံ: Getty)
ဘုရင်မကြီးအဲလိဇဘက်၏အနှစ်သက်ဆုံး: ဘုရင်မပုံခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း Sandringham ဖို့လမ်းအပေါ်ပိုပြီးမကြာခဏ join ဖို့ဆိုဖီကမေးတယ် (ရုပ်ပုံ: Getty)
ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် II ကိုအကြိုက်ဆုံးဆိုဖီနှင့်သူမ၏သမီး Louise ဘုရင်မကြီးသူမရဲ့အကြိုက်ဆုံး-ကြီးမြတ်မြေး (ရုပ်ပုံ: Getty)
"ထိုအခါဆိုဖီတစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံထားအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်ပြုစုပေမယ့်တော်ဝင်မိသားစုမှနေဆဲအတော်လေးအသစ်ဒါပေမယ့်လည်းနှစ်ခုဟန်ချက်ညီဆယ်ကျော်သက်, အားကစား, ပျော်စရာနဲ့ကြည်နူးဖွယ်ထမြောက်တော်မူခဲ့ပါသည်သာ။ "
တကယ်တော့တစ်ခုအတွင်း The Sun သို့ပြောကြားခဲ့သည်: "ဘုရင်မကြီး Louise နှင့် J Ames Balmoral မှာသူတို့ရဲ့အချိန်အရသာဆိုတဲ့အချက်ကိုချစ်သောသူနှင့် Louise ဖို့အထူးသဖြင့်အနီးကပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်, သူ့အကြိုက်ဆုံးခမ်းနား-သားဖြစ်လာကြပါပြီဟန်ဘယ်သူနီးကပ်စွာဂျိမ်းစ်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် ။
"လူးဝစ်ပုံကြမ်းဆွဲခြင်းနှင့်အောင်ချစ်ပြီးယုန်နဲ့သမင်၏ရုပ်ပုံများကိုအောင် Charlotte ရောက်စေဖို့အလွန်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ "